Maamulka G/Sh.hoose oo maanta Socdaal dheer ku maray deegano katirsan Shabeelada Hoose | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Maamulka G/Sh.hoose oo maanta Socdaal dheer ku maray deegano katirsan Shabeelada Hoose
Maamulka G/Sh.hoose oo maanta Socdaal dheer ku maray deegano katirsan Shabeelada Hoose
Gudoomiyaha gobolka Shabeelada Hoose mudabe Ibrahim Adan Ali Najah iyo wafdi balaaran uu hogaaminayay ayaa maanta socdaal dheer ku maray deegaano ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose oo ku yaalla wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye.
Gudoomiye Najah ayaa socdaalkiisa kormeerka ah waxa uu ka bilawday deegaanka Ceelasha Biyaha ee gobolka Shabeelada Hoose,iyadoo ay wehliyeen xubno ka tirsan maamulka gobolka, taliyaha booliiska Koonfur Galbeed iyo taliyaha booliiska gobolka Shabeelada Hoose iyo maamulka deegaankaasi waxaana gudoomiyaha iyo wafdigiisa ay kormeereen qeybo badan oo kamid ah suuqa Ceelasha Biyaha.
Sidoo kale xaaladaha amaan iyo dhaq dhaqaaqa ganacsiga ee ka socda deegaanka Ceelasha Biyaha ayey kormeereen gudoomiye Najah iyo wafdigiisa,waxaana booqashadaasi ay aheyd mid maamulka gobolka Shabeelada Hoose uu ku kormeerayay hormarada kala duwan ee ka socda deegaanka Ceelasha Biyaha.
Intaasi kadib gudoomiyaha gobolka Shabeelada Hoose iyo wafdigiisa ayaa sii watay socdaalkooda kormeerka ah waxaana wafdiga uu hogaaminayay gudoomiye Najah ay lug ku soo mareen inta u dhexeysa Ceelasha Biyaha iyo deegaanka Lafoole,si loo xaqiijiyo amniga oo ah muhiimada koowaad uu siiyay maamulka gobolka Shabeelada Hoose.
Ganacstada iyo maamulada deegaanada ay socdaalka kusoo mareen ayaa gudoomiye Najah waxay uga mahad celiyeen socdaalka amniga lagu xaqiijinayo ee maamulka gobolka iyo Saraakiisha amaanka ay ku marayaan deegaanadaasi.
Si kastaba ha’haatee socdaal dhulka ah oo amniga lagu xaqiijinayay kadib gudoomiye Najah iyo wafdigiisa ayaa yimid deegaanka Lafoole ee gobolka Shabeelada Hoose,waxaana ay kormeereen sida howlaha maamulka gobolka ay deegaankaasi uga socdaan.
Waxaa kale oo gudoomiye Najah uu kormeeray dhaq dhaqaaqsiyada ganacsi ee ka socda deegaanka Lafoole iyo baraha koontarool ee ciidamada amaanka u yaalla deegaanka Lafoole,isagoo ciidamada amaanka ugu hambalyeeyay doorka ay ka qaadanayaan xaqiijinta amaanka iyo suurta galinta in shacab Soomaaliyeed ay nabad ku gam’aan.
Socdaalka dhulka ee kormeerka hormarada ganacsi iyo xaqiijinta amaanka uu gudoomiye Najah uu ku maray deegaano ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose ayaa noqon doona mid taariikhi ah oo tilmaamaya in gobolka Shabeelada Hoose uu cagta saaray wadadii nabadda,bilicda iyo hormarka ganacsiga.
Maqaal horeDowladda Qadar oo cambaaraysay qaraxii Shalay ka dhacay Muqdisho
Maqaal XigaR/Wasaare Xasan Cali kheyre oo dalka dib ugu soo laabtay